China 55 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Nose End Mills mpanamboatra sy mpamatsy | Mingtaishun
Ireo mpamatsy ambony dia mamarana ny milina ho an'ny Titanium - 55 HRC ...
55 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Nose End Mills
Ny famolavolana roa sosona dia manatsara ny fahamendrehana sy ny famitana ny endriny amin'ny fomba mahomby. Ny fanapahana ny sisin'ny afovoany dia mampihena ny fanoherana fanapahana. Ny fahaizan'ny junk slot dia mahasoa ny fanesorana ny puce ary mampitombo ny fahombiazan'ny milina. Ny famolavolana 2flutes dia tsara amin'ny fanesorana puce, mora amin'ny fanodinana feed vertika, be mpampiasa amin'ny slot, profile, ary hole hole.
1.Fitaovana fampitaovana sy fitaovana fanandramana: Australian Anca, Germany Walter ary Alemana EOUER fitaovana fitsapana fitaovana
2.L MOQ ambany: 5 pcs ho an'ny tahiry ary 10 pcs ho an'ny fanaingoana.
3.OEM & ODM ekena: Misy endrika mifanaraka amin'ny sary na santionanao.
4.Good Service: Nanangana fifandraisana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifantsika izahay
5.Stock: tahiry lehibe ho an'ny milina famaranana mahazatra.
6. kalitao tsara sy vidiny mirary: kalitao tsara indrindra miaraka amin'ny vidiny mirary. Fihenam-bidy samihafa miorina amin'ny habetsahana
7.Rich traikefa: mpanamboatra manana 10 taona mahery izahay amin'ity sehatra ity.
8.100% amin'ny fandefasana ara-potoana: Manana tahiry lehibe izahay, noho izany dia afaka mandamina fandefasana entana haingana ho anao izahay.
9.Ny famokarana CNC mazava tsara: Manana tsipika famokarana CNC matotra sy feno izahay.
Ny filoham-pirenena sy ny mpikambana ao amin'ny orinasa dia te-hanome vokatra sy serivisy arak'asa ho an'ny mpanjifa ary handray sy hiara-hiasa amin'ny mpanjifa tompon-tany sy avy any ivelany ho amin'ny ho avy mamiratra.
Amin'izao fotoana izao dia manana mpanjifa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao isika, anisan'izany i Etazonia, Russia, Spain, Italia, Singapore, Malaysia, Thailand, Poland, Iran ary Iraq. Ny iraka ataon'ny orinasanay dia ny manome ny vokatra avo lenta avo indrindra miaraka amin'ny vidiny tsara indrindra. Manantena ny hanao orinasa miaraka aminao izahay!
Ny fahafaham-pon'ny mpanjifa hatrany no tadiavinay, ny famoronana lanja ho an'ny mpanjifa no adidintsika foana, ny fifandraisana eo amin'ny fiaraha-miasa mahasoa samy maharitra no tadiavinay. Mpiara-miasa azo antoka tanteraka ho anao izahay any Shina. Mazava ho azy, tolotra hafa, toy ny consulting, azo atolotra ihany koa.
Azonao atao ny mampahafantatra anay ny hevitrao hamolavola endrika tsy manam-paharoa ho an'ny maodelinao manokana hisorohana ireo faritra mitovy be loatra eo amin'ny tsena! Hanolotra ny serivisinay tsara indrindra izahay hanomezana izay rehetra ilainao! Mifandraisa aminay avy hatrany!
Ny orinasanay dia hifikitra amin'ny filozofian'ny orinasa "Quality voalohany,, tonga lafatra mandrakizay, miompana amin'ny olona, ​​fanavaozana ny teknolojia". Asa mafy hitazonana ny fandrosoana, fanavaozana eo amin'ny sehatry ny indostria, ataovy izay ezaka rehetra ataon'ny orinasa kilasy voalohany. Manandrana ny tsara indrindra vitantsika izahay mba hananganana ny maodely fitantanana siantifika, hianarantsika fahalalana matihanina be dia be, hampivelatra ny fitaovana famokarana mandroso sy ny fizotry ny famokarana, hamoronana vokatra avo lenta voalohany, vidiny mirary, kalitaon'ny serivisy avo lenta, fanaterana haingana, hanome anao mamorona sanda vaovao.
Teo aloha: 55 HRC Carbide 2 Flute Micro End Mill
Manaraka: 55 HRC Carbide 2 Flute Standard Length Ball Nose End Mills ho an'ny alumium
2 Fitoeram-bato vita amin'ny karbaona
4 Fitoeran-karbaona vita amin'ny karbaona
4 Aosinina Flute End
Single Mill Carbide End Mill
Single Sodina Faran'ny Mill
55 HRC Carbide 2 Flute standard halavan'ny baolina ...